Chifukidziro cheIsis chinowedzera munyika yose. Munyika yedu ndicho chikafu chinoonekwa chemweya uye chinomiririrwa nezvinhu zviviri zvepabonde.
Vol. 6 OCTOBER, 1907. Nha. 1
CHITSAI CHA ISIS.
ISIS inonzi inenge iri hanzvadzi yakaroora-mudzimai-amai. Akanzi mambokadzi wekumatenga, mutakuri wehupenyu, amai vevose vanogara uye anopa uye anovandudza mafomu.
Isis yakanga ichizivikanwa pasi pemamwe mazita akawanda uye kunamatwa pasi rose nehutano hwemazuva ekutanga munyika yose yeEgypt. Zvose mapoka uye makirasi zvakanga zvakafanana vanamati veIsis. Muranda ari pasi pekushongedzwa, iyo mahupenyu ehupenyu ainge akangoburwa nemabasa ake ezuva nezuva pamatombo ephiramiti; iyo yakakosha kunaka, iyo hupenyu hwaiva kurota kunofadza kwemufaro pakati pemimhanzi inonyorera uye maruva anonhuhwirira, akashambidzwa mumafuta anonhuwira uye akafuridzirwa nemhepo yakatsamwa kwazvo, iyo iyo pfungwa dzose dzakasimbiswa nehupenzi uye unyanzvi hwomutambo uye zvakagadziriswa nemidziyo yemakore kufunga nekushingaira; iyo nyanzvi-nyanzvi-mashiripiti aibva panzvimbo yake mu piramidi akaona kubhururuka kwevatambi vekudenga, akayera muyero wekufambisa kwavo uye arc yekufamba, yakaverengwa kubva panguva yekuonekwa kwavo munzvimbo iyo yose muhupenyu hwavo, uye saka vaiziva nezvezvakabva, zvisikwa uye kuguma: vose zvakafanana vaiva vanamati veIsis, asi mumwe nomumwe maererano nekirasi yake uye mutsa uye kubva mundiza yake yezivo.
Muranda uyo akakurudzirwa kuita chiito nechisimba aisagona kuona "amai vane nyasha vetsitsi," saka akanamata chimwe chinhu chaaigona kuona uye icho chakanzi chitsvene kwaari: mufananidzo wakavezwa webwe, kwaaizodurura kunze kunorwadza kwemweya wake uye kunyengetera kuti asunungurwe kubva kuzvisungo zvemurairidzi webasa. Kubviswa pakubata nekuoma, asi kuziva Isis hakuna nani kupfuura muranda wekutambudzika, kunaka, muranda wekufara, akakurudzira kune zvisingaonekwi Isis kuburikidza nezviratidzo zvemaruva netemberi uye akakumbira Isis kuti arambe achiita bounty iyo yaidiwa nayo. Mukufamba kwezvisikwa zvekudenga, nyanzvi-nyanzvi aizoona mitemo uye nzira yezuva. Mune izvi aiverenga mutemo uye nhoroondo yezvakasikwa, kuchengetedzwa uye kuparadzwa: yaizozvibatanidza nemafungiro nemafungiro evanhu uye kuverenga zvakagadziriswa zvemadhenari sezvakatemerwa nemabasa evanhu. Achiziva kubatana kwechiito ichi, mutemo mukati mekuvhiringidza uye kwechokwadi shure kwechitarisiko, nyanzvi-nyanzvi akaita kuti azive mitemo yeIsis kuvatongi venyika, avo vaiteerera mitemo iyoyo maererano nehupenyu hwavo nehuchenjeri. Kuona chiito chisingachinjiki chemutemo uye kubatana kuburikidza nemhando dzose dziripo, nyanzvi-nyanzvi-mashiripiti airemekedza mutemo, akaita maererano naro uye anodzidzisa chokwadi chimwe chete mumhando dzakagadzirwa neasingaoneki Isis.
Varanda vemarwadzo nemafaro vaiziva Isis chete kuburikidza nenzira yekufananidzira uye pfungwa; avo vakachenjera vaiziva Isis sekuti anoramba achiita uye anotsigira zvinhu zvose.
Vanhu vakachinja zvishoma kubvira pazuva rekare reKhem. Zvido zvayo, vavariro, uye zvinangwa zvaro zvakasiyana chete muhupamhi, kwete nenzira. Nheyo dze ruzivo dzakangofanana nezvakawanda. Nzira uye mafomu oga zvakashanduka. Mweya iyo yakabatanidzwa muhupenyu hweEgypt inogona zvakare kupinda muchivako mumazuva ano. Isis haana kufa muEgypt sezvo akanga asina kuberekerwa ikoko. Kunamata kuripo kune-zuva sezvakaitwa ipapo.
Muchiri anokambaira mumatumbo epasi anonyengetera kumufananidzo waMaria kuti amusunungurire kubva mumaketani ekushanda. Icho chinotyisa chaser chekufadza chinonyengeterera kurambira kwezvifadza. Munhu akachenjera anoona mutemo uye anoronga kuburikidza nekusaruramisira uye kusanzwisisika uye anobata maererano neicho chechokwadi chaanodzidza kuziva kuburikidza nekuonekwa kwose. Isis ndeyechokwadi nhasi-mumazuva aKhem. Ku-nhasi Isis inonamatwa nevatori vayo sechifananidzo, chakanaka, kana chaicho, sezvaakanga ari panguva iyoyo. Zita uye chimiro chezvitendero zvakashanduka asi kunamata uye chitendero zvakafanana. Vanhu vanoona uye vanonamata Isis maererano nemasikirwo avo, vanhu uye zvidimbu zvekusimudzira. Sezvo kunamatwa kweIsis kwakange kuri maererano nekuchenjera kwevanhu veEgypt, saka ikozvino maererano neuchenjeri hwevanhu vezera redu. Asi kunyange tisati tasvika pakusimuka kwatinoenda kune imwe nzvimbo inofanirana nekubwinya neuchenjeri hweEgypt, vanhu vedu vari kuita sevanopera mukunamata kwavo kweIsis sezvakave vaIjipita mukuderera kweEgypt. Mukuwedzera kune kunakidza kwemazwi, simba-mari, zvematongerwe enyika, uye mupirisita zvinorega kubva kuvanhu ruzivo rweIsis nhasi-sekufanana nemazuva eEgypt.
Iye uyo aida kuziva Isis anofanira kupfuura kupfuura chifukidziro kupinda mumamiriro evanhu vasina Isis; asi kune vanhu vose Isis anozivikanwa chete sezvaari, akafukidzwa zvikuru uye akafukidzwa akafukidzwa.
Asi ndiani Isis uye chii chifukidziro chake? Nhema yeChidzitiro cheIsis chinogona kutsanangura. Nyaya yacho inomhanya saizvozvo:
Isis, amai vedu vasina kuchena, chimiro, nzvimbo, vakafukidzira chifukidziro chakanaka chokuti kuburikidza nazvo zvinhu zvose zvingadaidzwa kuti zvivepo nekupiwa. Isis yakatanga mumasina ake asingaoneki kuti aende uye sezvaaikwanisa kuti akanda mavara evharivha yake, yakaoma kupfuura chiedza chezuva, pamusoro pevamwari. Kuenderera mberi kuburikidza nemunyika inorema, chidzitiro chakanga chakavezwa zvakasununguka kusvikira chasvika pasi uye chakavhara vanhu uye nyika yedu.
Ipapo vanhu vose vakatarisa uye vakaona kubva kune rumwe rutivi rwechifukidziro chavakanga vari, kunaka kweIsis kuburikidza nekugadzirwa kwechifukidziro chake. Ipapo kwakawanikwa mukati mevheiri rudo nekusafa, avo vanogara nekusingaperi uye avo vasingagoni kuparadzaniswa, avo ivo vanamwari vakakurumbira vanowira pasi mukunamata.
Vakafa vakaedza kuisa izvi zvisikwa zvekusingaperi mufananidzo kuti vangazvichengeta nekuzvinzwa mukati mechidzitiro. Izvi zvakaita kuti chidzitiro chiparadzaniswe; kune rumwe rutivi murume, pane mumwe mukadzi. Munzvimbo yerudo nekusafa, chifukidziro chakaonekwa kune vanhu kuvapo kwekusaziva uye rufu.
Ipapo kusaziva kwakakonzera rima uye gore rakaoma pamusoro pechifukidzo chisingafadzi vanhu vanogona kutyora rudo kuburikidza nekuedza kwavo kuifambisa muchidzitiro. Rufu, zvakare, yakawedzera kutya kune rima, iro kusaziva kwakange kwaunza, zvekuti vanhu vangave vasati vazvibatanidza pachavo nhamo isingaperi mukuedza kurondedzera kusafa mumapanga echidzitiro. Rudo uye kusafa, saka, zvino rakavanzika kubva kune vanhu nekusaziva uye rufu. Kusanzwisisa kunosvibisa chiono nerufu zvinowedzera kutya, izvo zvinodzivisa kuwanikwa kwe rudo nekusafa. Uye anofa, achitya kuti angave akarasikirwa zvachose, anogumbatira uye anonamatira pedyo nechofukidzo uye achishevedzera achida kupinda murima kuti azvivimbise.
Isis achiri kumira mukati mechidzitiro chake achimirira kusvikira chiratidzo chevana vake chichange chakasimba zvakakwana kuti chirove uye chione kunaka kwake kusina kusvibiswa. Rudo ruchiripo kuti ruchenese uye ruchenese pfungwa kubva mumatambudziko aro uye mavanga ezvoudyire nemakaro, uye kuratidza kuyanana nevose vanorarama. Kusafa ndeyeiye uyo ane maziso asingadziviri mukati, asi uyo anotarisa zvishoma nezvishoma kuburikidza nechifukidziro cheIsis, uye mberi. Zvino paanowana rudo anonzwa akafanana kune vose, anova mudziviriri, anotsigira, uye muponesi kana mukuru mukuru, weIsis nevana vake vose.
Isis, yakachena uye isina kusvibiswa, inokonzerwa nezvinhu zvakasiyana-siyana mukati mekusingaperi, nzvimbo isingagumi. Zvepabonde ndiro chifukidziro cheIsis chinoita kuti zvionekwe kune nyaya kana chichifumisa chiratidzo chevanhu. Kubva pamafungiro nemaitiro evanhu uye zvipenyu zvenyika dzakasakara, izvo Isis (zvisikwa, zvinhu, nzvimbo) zvakachengetedzwa mukati maro, nyika yedu yakabudiswa maererano nemutemo wechikonzero nemigumisiro. Nokudaro Amai Isis vakatanga kufamba kwavo munzvimbo yavo isingaonekwi uye ikoko kwakaderedzwa zvishoma nezvishoma kuva vose vakange vatora chikamu mumatambudziko akare; saka nyika yedu yakaumbwa kubva kune isingaoneki segore rinobudiswa kubva kudenga risina makore. Pakutanga zvisikwa zvenyika zvakanga zviri chiedza uye zvinotyisa; zvishoma nezvishoma vakanyorova mumitumbi yavo uye mafomu kusvikira ivo pakupedzisira vari sezvatinozviwana isu kuva nhasi. Mumazuva iwayo okutanga, zvakadaro, vamwari vaifamba pasi nevarume, uye varume vakanga vakaita savanamwari. Vakanga vasingazivi zvepabonde sezvatiri kuita iye zvino, nokuti vakanga vasina kunyanya kuvhiringidzika mukati mechifukidziro, asi zvishoma nezvishoma vakazoziva sezvo simba rakagadziriswa uye rakava rakaoma. Zviratidzo zvevanhu vakanga vasina zvepabonde zvakanga zvisingasviki zvishoma kupfuura zvedu; vaigona kuona chinangwa chemutemo uye vakashanda maererano naro; asi sezvo kutarisa kwavo kwave kwakanyanya kutorwa nezvinhu zvenyika, uye maererano nemutemo wepanyama, maziso avo akavharwa kunyika yenyika yemweya, uye yakazarurirwa zvakazara kune kunze kwenyika; ivo vakava nekuita zvepabonde uye vakava vanhu vese zvatinofanira nhasi.
Munguva dzekare miviri yedu yakagadzirwa nekushanda kuburikidza nemutemo wepanyama. Nhasi-miviri yedu inoumbwa nechido, uye kazhinji kazhinji inopinda mukurwisana nezvido zvevaya vanozvigadzira. Isu tinomira mumitumbi yedu pamagumo ekupedzisira e-arc arc uye pamusorosoro wekushanduka-shanduka. Kusvikira nhasi tinogona kutanga kukwira, kubva pamatanda akaipisisa uye akareruka kusvika kumakumbo akareruka uye akaisvonaka kune chifukidziro cheIsis, uye kunyange kuputira chifukidziro zvachose, kusimudzira pamusoro payo, uye kutarisa Isis pachake panzvimbo yemhando dzakawanda dzatinoita kumubata kuti ave, achimududzira nechifukidziro.
Maererano nemitemo iyo nyika yedu inotongwa vanhu vose vanouya munyika vanoita izvi nekugadzwa kweIsis. Anovaitira ivo chifukidziro chavanofanira kupfeka munguva yavo yekugara pano. Chifukidziro cheIsis, zvepabonde, chakasunungurwa uye chakasungirirwa nemafate, avo vekare vakadana Vasikana Vekukosha.
Chifukidziro cheIsis chinowedzera munyika yose, asi munyika yedu inomiririrwa nezvinhu zviviri zvepabonde. Kuita zvepabonde ndiko kusingaoneki kwaro uko kwakagadzirwa nenguvo izvo zvipfeko zvisingadi kuti zvigadzire kuwana mukana wekunyama uye kutora chikamu munyaya dzehupenyu. Izvo ndezvechiito chekupesana, mweya uye nenyaya sechisimba uye chikafu, kuti chifukidziro chinova zvishoma nezvishoma chipfeko chinoonekwa chemweya; asi kuputika uye kusvinura kwakafanana nemidziyo uye zvinhu izvo zviri kuchinjwa nguva dzose uye zvakagadzirirwa nechiito chepfungwa pamusoro peshuvo. Pfungwa ndeye chikonzero chechiito chepfungwa pamusoro peshuvo uye kuburikidza nepfungwa (♐︎) nyaya yemweya yehupenyu (♌︎) inotungamirirwa mufomu (♍︎).
Mweya inotora chifukidziro cheIsis nokuti pasina iyo havagoni kupedzisa rwendo rwekufamba kwavo kuburikidza nenyika dzemafomu; asi vatora chifukidziro, vanowedzera zvakanyanya mumapanga ayo avo vasingakwanisi kuona sechinangwa chekugadzirisa kwayo, chero chinhu kunze kwekugara kwevanhu kana zvekunakidzwa kwavanoita.
Mweya pachawo hauna zvepabonde; asi kana ukapfeka chifukidziro zvinoratidzika kuva nepabonde. Rimwe rutivi rwechifukidziro rwunoonekwa semurume, rumwe rutivi semukadzi, uye kuwirirana pamwe nekushandura kwechifukidzo kunovhura masimba ose anotamba nayo. Zvadaro pane zvakasikwa uye zvakagadziridzwa manzwiro echidzitiro.
Manzwiro ehupombwe ndeyemutsara wemanzwiro evanhu anowedzera kuburikidza nechikamu chega chehupenyu hwehupenyu, kubva kune chekuderera kwakaderera, kusvika kune manzwiro ezvakaitika, uye kuburikidza nezvose zvinyoronyoro zvinomirira munhu. Manzwiro uye tsika dzechidzitiro cheIsis zvinoratidzirwa zvakafanana nevarombo vanotenga madzimai avo kana kuwedzerwa nhamba yavo nekodzero yekubatwa; kuburikidza nezviito zvechivalry; kuburikidza nekutenda kuti zvepabonde rimwe nerimwe rakasikwa kune rimwe Mwari; uye neavo vanodudzira chinangwa chepabonde maererano nemhando dzose dzemafungiro akanaka. Zvose zvakafanana mafungiro anowedzera kukosha kana kukwezva kwepabonde rimwe nerimwe kune rimwe. Asi manzwiro anoita seanofadza kwazvo vateereri vakawanda vevheiri ndeye pfungwa yemapatya mweya yemweya, anowanikwa pasi pemhando dzakawanda maererano nezvinodiwa uye chido chemuitendi. Ingotaura zviri izvozvi, kuti murume kana mukadzi ari hafu yekuva. Kuzadza uye kukwana kuve, imwe hafu inodiwa uye inowanikwa mune imwe yevasikana. Kuti iyo miviri miviri yakaitwa chete uye inonzwisisana kune mumwe nemumwe, uye inofanira kutenderera kuburikidza nekufamba kwemazuva kusvikira vasangana uye vobatana ndokudaro vogadzira kuve kwakakwana. Asi dambudziko nderokuti, pfungwa iyi inonakidza inoshandiswa sechikonzero chekuregeredza tsika yakagadziriswa yemitemo uye mabasa echisikigo .²
Mafungiro emapatya maviri ndeimwe yezvipingamupinyi zvikurusa kumweya kufambira mberi, uye nharo yemweya wemapatya maviri inoparadza pachayo kana ichionekwa yakadzikama muchikonzero chechikonzero kune uyo asina kuwana hukama hwomunhu kana imwe hafu uye asiri naiyewo anotambudzika zvikuru nekurwadziwa kwenyoka yepabonde.
Izwi rokuti zvepabonde rine zvuru zvakasiyana-siyana kune vose vanozvinzwa. Kune imwe neimwe inofanirwa maererano nehutano hwomuviri wake, dzidzo yake, uye pfungwa dzake. Kune imwe iyo zvinoreva zvose izvo kuchiva kwechido chemuviri nemhuka zvinogona kureva, kune mumwe kunzwa kwakanatswa kwakanyanya kwetsitsi nerudo sekuratidzwa nekuzvipira kwemurume nemudzimai, uye mumabasa ehupenyu.
Mhedziso yepabonde inotorwa kune imwe nzvimbo yechitendero, apo munhu anozvipira anofunga nezvehupenyu huripo-wose, hunoziva uye Mwari wemasimbaose-kureva, sababa uye muumbi wezvinhu zvose-uye amai vane rudo vetsitsi, vanokurudzirwa nemunhu anozvipira kuti amunyengeterere kuna Mwari, Baba kana Mwanakomana. Nokudaro pfungwa yepabonde inobatwa nemafungiro evanhu, kwete chete sekutonga panyika ino yakaipisisa, asi sekupararira kuburikidza nenyika yose uye kunyange kutonga kudenga, nzvimbo isingaori. Asi kana mutezo mumwechete wepabonde mune zvakaderera kana mupfungwa huru, chifukidziro ichi cheIsis chinofanira kunge chichifukidzira meso anofa. Vanhu vanogara vachidudzira izvo zvinorara kunze kwechifukidziro kubva kune rumwe rutivi rwechidzitiro chavanotarisa.
Hazvifaniri kushamisika kuti pfungwa yemunhu inonakidzwa zvikuru nemafungiro ekuita zvepabonde. Zvakatora makore mazhinji kutora nyaya mumhando dzayo yemazuva ano, uye pfungwa iyo yave ine chokuita nehutano hwakasiyana-siyana hwemhando dzenyaya inofanirwa kunge inofadzwa navo.
Uye zvekare zvepabonde, chifukidziro cheIsis, chakanga chave chakavezwa pamusoro pese uye zvakapoteredza uye kuburikidza nemhando dzose, uye chido chepabonde muchimiro chakakunda uye ichiri kukunda. Sezvo pfungwa dzakazara zvakanyatsobatanidzwa mune zvepabonde, zviratidzo zvaro zvakasvibiswa nechidzitiro. Iyo yakazviona ihwo uye nevamwe kuburikidza nechidzitiro, uye pfungwa dzose dzepfungwa dzichiripo uye dzichave dzakapfekedzwa nevheiri kusvikira uyo anogadzika wevheiri achadzidza kusarura pakati pomutakuri uye chidzitiro.
Nokudaro zvose zvinoenda kunoita munhu murume, zvakaputirwa nechofukidzo cheIsis.
Zvipfeko zvinoshandiswa kune zvinangwa zvakawanda uye zvinowanzobatanidzwa nevakadzi. Chisikwa chinotaurwa sechikadzi, uye muchimiro uye chiito chinomiririrwa nemukadzi. Zvisikwa zvinogara zvichiri kuputira machira pamusoro payo. Nevakadzi vheiri vanoshandiswa sekanakisa mavheiri, mavhirivha echikwata, mavheiri ekuchema uye kuvadzivirira kumhepo yakasimba uye guruva. Zvisikwa pamwe chete nemudzimai anochengetedza, anovanza uye anozvigadzirisa nekushandiswa kwevheiri.
Nhoroondo yekusunga uye yekupfeka chifukidziro cheIsis kusvikira panguva ino, pamwe nehuporofita hwehuyo yeramangwana, inotsanangurwa uye inoratidzwa muhupenyu hwomunhu kubva pakuberekwa kusvika kune yakagadzirirwa njere nekukwegura. Pakuberekwa mwana anotarisirwa nemubereki; haina kufunga kana kutarisira. Izvo zvishoma zvishoma muviri unotora zvishoma nezvishoma unotora fomu yakajeka. Nyama yaro inova yakasimba, mapfupa ayo anowedzera, uye inodzidza kushandiswa kwemazwi ayo nemakumbo ayo; haisati yadzidza kushandiswa uye chinangwa chepabonde, chifukidziro chayo chakavharwa. Iyi nyika inomiririra maitiro ekutanga ehupenyu; vanhu venguva iyoyo vakanga vasina kufunga nezvechifukidziro cheIsis, kunyange zvazvo vaigara mukati maro. Mitumbi yavo yakanga isinganakidzi nehupenyu, ivo vakapindura uye vakaita nemaitiro uye masimba semasikirwo nemufaro sezvo vana vachiseka uye vachitamba muchiedza chezuva. Urwere haruna kufunga nezvechifukidziro icho chave chapfeka, asi icho chisingati chava kuziva. Iyi ndiyo mhete yegoridhe yevana sezvayakanga iri yevanhu. Gare gare mwana anoenda chikoro uye anozvigadzirira nokuda kwebasa rayo munyika; muviri wayo unokura uye unova muhuduku, kusvikira maziso ayo akazaruka-uye anoona uye anoziva chifukidziro cheIsis. Zvino nyika inochinja kwairi. Zuva rinorasikirwa nemasvingo aro, mimvuri inoita seinowa pamusoro pezvinhu zvose, makore anounganidza apo hapana aive aonekwa kare, rima rinoratidzika sekuputira pasi. Vechidiki vakawana zvepabonde uye zvinoratidzika sokurwara kwakakwanira kune vaitakura. Izvi zvinokonzerwa nekuti pfungwa itsva yepfungwa yakasvika mukati mayo maitiro uye inowanikwa mumasimba ayo, ayo akafanana nematavi emuti weruzivo.
Nhoroondo yekare yeAdhamu naEvha mubindu reEdheni uye zvakaitika kwavari nenyoka zvakare zvakare, uye kusuruvara kwe "kuwira kwevanhu" kwakambosanganazve. Asi pfungwa yekuti-inonzi chivi inova pfungwa yekufadzwa; gore remaima iro rakaita sokuti rakavhuvhuta nyika nokukurumidza rinopa nzira kumhando dzakasiyana-siyana dzemahombekombe emvura uye hues. Mhedziso yevhavha inoonekwa; gorosi kusavhiringidzika kuve nziyo dzorudo; ndima dzinoverengwa; nhetembo yakaumbwa kune chakavanzika chechidzitiro. Chifukidziro chinogamuchirwa uye chakapfekwa-sechinhu chisina kuchena chemucheka, chipfeko chinosvibisa chekunzwa, chigadziro chinogadzirisa chebasa.
Utano hwomutambo hwakasvibiswa mukati mamurume wekutanga webasa umo mutambo wakambovepo. Kunyange zvazvo kazhinji zvisingatauriki, zvishoma nezvishoma, uye zvisingafungi, zvakadaro, zvisinei, mabasa evhavha anotorwa. Ruzhinji rwevanhu kusvika nhasi rakaita sevarume-vana nevakadzi-vana. Vanouya munyika, vanorarama, vanoroora, uye vanofamba kuburikidza nehupenyu vasingazivi chikonzero chekuuya kwavo kana kwekuenda kwavo, kana chinangwa chekugara kwavo; hupenyu ibindu remufaro, imba yevadzidzisi, kana semaminari ediki-seminari umo vanodzidza zvishoma uye vane nguva yakanaka vasina kufunga zvakawanda nezveremangwana, zvose maererano nezvido zvavo uye zvakatipoteredza. Asi kune nhengo dzemhuri yevanhu vanoona chokwadi chinopisa muhupenyu. Vanofunga kuti vane mutoro, vanoziva chinangwa, uye vanoedza kuiona zvakajeka uye kushanda maererano nezvayo.
Murume, mushure mokurarama kuburikidza nekutanga kwehukama hwake, achifunga nezvekutarisira uye mabasa ehupenyu hwemhuri, ainge apindira mubasa rake rehupenyu uye akatora chikamu chake munhau dzevanhu, achiita basa rehurumende paaida, anonzwa pa pakupedzisira kune chimwe chinangwa chisingazivikanwi kushanda kuburikidza nevari mukati mevheiri iyo yaaipfeka. Anogona kazhinji kuedza kubata zvinyorwa zvekuvapo uye chakavanzika chaanonzwa. Nezera rinokura, huchenjeri huchasimbiswa uye chiratidzo chacho chichajekesa, zvichipa kuti moto uchingorara mukati mechifukidzo uye hauna kuzvipisa, uye kupa kuti moto uyu urege kuputika, uchiita kuti utsi hukwire uye hupfekedze chiono uye hugadzikane pfungwa.
Sezvo moto wekuchiva uchitungamirirwa uye chifukidziro chikaramba chakasimba, micheka yaro inonatswa uye inocheneswa nekuita kwepfungwa kufungisisa nyika yakanaka. Pfungwa haisati yatariswa nevheiri. Mhedziso yaro haisunungurwi nehuputi uye huputi hwechifukidziro uye inodzidza kufungisisa zvinhu sezvavari pane pane kupiwa maitiro uye chimiro chechidzitiro. Saka kukwegura kunogona kukura muuchenjeri panzvimbo yekupinda muuchenjeri. Zvino, sekuchenjera kunowedzera simba uye huMwari huri pachena, chifukidzo chechifukidziro chinogona kunge chakasakara zvokuti chinogona kuiswa parutivi. Kana pane imwe kuberekwa chifukidziro chinotorwa zvakare, maonero angave akasimba zvakakwana uye simba guru zvakakwana muhupenyu hwepakutanga, kushandisa masimba akachengetwa mukati mechifukidzo nokuda kwechinangwa chavachazogadziriswa, uye rufu rungakundwa.
Chifukidziro cheIsis, zvepabonde, chinounza kune vanhu matambudziko avo ose, kutambura nekuora mwoyo. Kupfurikidza nechidzitiro cheIsis chinouya kuberekwa, zvirwere, nekufa. Chifukidziro cheIsis chinotichengetedza mukusaziva, kunobereka godo, ruvengo, rancor uye kutya. Nekupfeka kwechifukidzi kunouya chido chinotyisa, kufungidzira, unyengeri, kunyengera uye kuda-o'-the-wisp vavariro.
Ko, zvino, zvepabonde zvingarambwa, kurambidzwa, kana kubviswa kuti tibvise chifukidziro chinotivhara kubva munyika yezivo? Kuramba, kurega kana kudzvinyirira zvepabonde ndeyekuparadza zvachose nzira dzokukura nadzo. Ichokwadi kuti isu tiri vatakuri vechidzitiro chinofanira kutitadzisa kusazviramba; kurega zvepabonde kungave kukaramba kwebasa rako nebasa, kubvisa munhu zvepabonde ndiko kuedza nhema uye kuparadza nzira dzekudzidza huchenjeri kubva pane zvidzidzo izvo mabasa uye mabasa ekudzidzisa zvepabonde, uye kunzwisisa mafomu ayo Isis anoratidza isu semifananidzo pachifukidzo chake uye sezvidzidzo zvoupenyu.
Gamuchirai kupfeka kwechifukidziro, asi musaita kuti kupfeka kwacho chive chinhu chehupenyu. Funga nezvemabasa ekuvhara, asi usapindira mumasero ayo kuitira kuti urege kukanganwa chinangwa uye udhakwa nevezvinyorwa zvevheiri. Ita mabasa evharivha, nevhavha sechigadziro chekuita, asi chisina kushandiswa kune chiridzwa uye chibereko chekuita. Chifukidziro hachigoni kubviswa, chinofanira kunge chakasakara. Nokutarisa zvishoma nezvishoma kuburikidza nayo inopera kure uye inobvumira kubatana kwezivo neanozivikanwa.
Chifukidziro chinochengetedza uye chinovhara kubva mupfungwa dzevanhu zvinopikisa uye masangano angave arikukuvadza mukusaziva kwake kwemazuva masimba evhariri. Chifukidziro chepabonde chinodzivisa pfungwa pakuona nekusangana nemasimba asingaoneki masimba asingaoneki pamusoro pake, uye izvo, kufanana neshiri dzeusiku, dzinokweverwa nechiedza pfungwa yake inokanda munzvimbo dzayo. Chifukidziro chepabonde chikamu uye nzvimbo yekutamba yemasimba emasikirwo. Kuburikidza nayo iyo kupararira kwemazvikamu ehupfumi kuburikidza neumambo hwakasiyana hunoendeswa mberi. Nechifukidziro chepabonde, mweya unogona kupinda mumamiriro ezvinhu ezvisikwa, tarisa maitiro ake, ziva nehutano hwekushandura uye kuparadzaniswa kubva kumambo kuenda kuumambo.
Kune zvikamu zvinomwe mukurudzirwa kwevanhu kuburikidza nechidzitiro cheIsis. Zvine zvakapfuura, isu tiri muchishanu, uye maviri achiri kuuya. Aya matanho manomwe ndeokuti: kusava nemhosva, kutanga, kusarudzwa, kurovererwa, kutapudza, kuchenesa uye kukwana. Kuburikidza nezvikamu izvi zvinomwe, mweya yose inofanira kupfuura iyo isati yawana rusununguko kubva pakuitika kwekuzvarwa patsva. Aya ndiwo matanho manomwe ane chokuita nehupenyu hwakaratidzwa, vanocherechedza kushandurwa kwevanhu mumamiriro ezvinhu kuti vawane ruzivo, kukunda, kurayiridza, uye kuwana rusununguko kubva munyaya mukupedzisa rwendo rwavo rwekushanduka.
Kune avo vanoziva nechinangwa chezviratidzo zvezodhiac, ichava rubatsiro pakunzwisisa zvikamu kana zvidimbu zvakataurwa, kuziva kuti zvinomwe zvinoshandiswa sei uye zvinonzwisiswa ne zodiac, uyewo kuziva kuti zviratidzo ndezvipi kune iyo chifukidzo cheIsis chinoshanda. In chimiro 7, zodiac inoratidzirwa nezviratidzo zvayo gumi nembiri mukuraira kwavo. Chifukidziro cheIsis chinotanga pachiratidzo che gemini (♊︎) munyika isina kufarirwa uye inopfuurira pasi kubva kune imwe nyika isingaoneki kuburikidza nechiratidzo chokutanga chenyika inoratidzika, kenza (♋︎), kufema, iyo yekutanga inoratidzwa kuburikidza nenyika yenyika, kuburikidza nemweya wechiratidzo nhasi, (♌︎), hupenyu. Kuva wakanyanyisa uye wakanyanya kukura mumatunhu ayo kuburikidza nenyika yepasi, inomiririrwa nechiratidzo che virgo (♍︎), chimiro, chinozopedzisira chasvika pachikamu chayo chakaderera mubhoibheri libra (♎︎), zvepabonde. Zvino inotendeuka kumusoro pamusoro payo yekushanduka-shanduka, inofanirana nemakumbo ayo pasi, kuburikidza nechiratidzo che scorpio (♏︎), chido; sagittary (♐︎), anofungidzirwa; capricorn (♑︎), zvakasiyana; pane mugumo wezvose zvaunoita uye munhu oga. Kudzoka zvakare kupinda kusina kuonekwa kunoguma pane chimwe chikamu, asi pamucheto wakatarisana wegege yakatanga kubva muchitarisiko aquarius (♒︎), mweya.
Chifukidziro cheIsis chakafukidzwa kumusoro uye mune zvemweya pamwe chete nevashoma uye zvenyika. Inotanga pachiratidzo che gemini (♊︎), chigadzirwa, chinogadzirisa chinonyanya kukosha, icho chakachengetedzwa zvakasimba, uye chinopfukira pasi mukutsva kwayo. Isis pangoro yake yakakwirira hapana ziso rinotadza rinogona kuona, sezvo maziso evanhu asingafi haagoni kutora nyika kunze kwekuratidzwa; asi kana mweya wapfuura nepakati pemitevedzo manomwe, ikozvino, kubva pakuona kwe aquarius (♒︎), mweya, anoona Isis sezvaari pa gemini (♊︎), asina kuchena, akachena, asina mhosva.
Zvisikwa zvezvikamu zvinomwe zvinoratidzwa nezviratidzo. Kanzira (♋︎), kufema, ndiyo iyo danho kana dhigirii iyo mweya yose inobatanidzwa kana kuti ine chokuita nenyika yepanyama inotanga; iyo nyika isingatauriki nekunyepedzera kana kusachena, nzvimbo yekusachena. Ikoko maitiro ari mumweya wayo uye mwari-akafanana, achiita maererano nemutemo wepasi rose unofema uye unobudisa mariri nyaya yemweya, hupenyu, hwechikamu chinotevera kana chidimbu, nhasi (♌︎), uye saizvozvo kudarika chifukidziro, nyaya yemweya inozvivakira pachavo.
Upenyu semafungiro emweya, uri munharaunda yekutanga yepabonde. Zvisikwa padanho rekutanga rehupenyu kune vaviri-vanoita zvepabonde. Muchiratidzo chinotevera, virgo (♍︎), mafomu, vanopinda mudanho rekusarudza, uye miviri iyo yaive yaviri yava iye zvino yava yakasiyana mune zvepabonde. Muchikamu chino chimiro chemunhu chinotorwa, uye pfungwa dzinobatanidzwa. Ipapo unotanga danho kana chiro chekurovererwa, umo iyo inopfuurira kuburikidza nekusuwa kwose uko vaponesi vezvitendero zvose vanonzi vakatsungirira. Ichi ndicho chiratidzo chekuenzanisa uye chiyero umo inodzidza zvese zvidzidzo zvehupenyu hwemuviri: huri muhupenyu hwepabonde hunodzidza zvese zvidzidzo zvinogona kudzidziswa zvepabonde. Kuburikidza nezvose zvinogadziriswa zvinodzidza kuburikidza nekushanda kwemabasa ehukama hwemhuri yese uye inofanirwa kunge ichiri mukati momuviri wepabonde, kupfuura nedzimwe zvidzidzo. Zvisikwa zvenyama chete zvevanhu zviri mune iyi, asi vanhu sechikwata chiri muchiratidzo chinotevera, scorpio (♏︎), chido, uye chiyero chekutenderera. Muchiratidzo ichi, ego inofanira kuendesa zvido kubva kune zvepabonde chete (♎︎), kusvika kune zvinangwa zvakakwirira zvehupenyu. Ichi ndicho chiratidzo uye chidimbu umo zvishuvo zvose nekuchiva zvinofanira kushandurwa, zvisati zvaona kubva kune ndege yacho maitiro emukati nemasimba zvinomira mukati uye shure kwechitarisiko chemuviri.
Dhigirii inotevera ndeyo iyo iyo mafungiro-maitiro anocheneswa. Izvi zvinoitwa nepfungwa, (♐︎). Zvadaro mhepo uye hupenyu hwehupenyu zvinonzwisiswa uye zvinotungamirirwa nepfungwa, kuburikidza nekushuva kusvika muchikamu chevanhu chekupedzisira, apo munhu anova asina kufa. Chikamu chekupedzisira uye chechinomwe ndechokuti wakakwana, pachishamiso capricorn (♑︎), zvakasiyana; umo maakakunda kushuva kwose, kutsamwa, kusina maturo, godo nemano akaipa, akachenesa uye akachenesa pfungwa yemafungiro ose anonzwisa tsitsi, uye akaziva hupenyu hwekugara, munhu anofa anofuka kusafa, kuburikidza nemitambo yakanakisisa. Zvose zvinoshandiswa uye zvinangwa zvechifukidziro cheIsis zvino zvinonzwisiswa zvakajeka, uye zvisingafi zvisingaiti avo vose vari kurwisana mukusaziva kwavo mumapanga maduku evhariri.
² Maona The Word, Vol. 2, Kwete. 2, “Bonde.”